ယောက်ျားတွေ ခြေထောက်အလှပြုပြင်မှု ခံယူသင့်တဲ့ အကြောင်းငါးချက် – Gentleman Magazine
ယောကျြားတှေ ခွသေညျးအလှပွုပွငျမှု ခံယူသငျ့တဲ့ အကွောငျးငါးခကျြ
သင် ခုံအကြီးကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေရပြီး သင့်ခြေထောက်ကို ဇလုံ ကြီးကြီးထဲက ရေနွေးနွေးထဲမှာ မြှုပ်ထားရပါတယ်။ ခြေသည်းအလှပြင်ဖို့ သင်လုပ်ပေးရမှာကတော့ ဒါပါပဲ။ ယောက်ျားတွေ ခြေသည်းအလှပြုပြင်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ငါးချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁. ခြေထောက်ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလာပါတယ်
ညစ်ပါတ်တဲ့ ခြေထောက်တွေဟာ ဘက်တီးရီးယားမျိုးစုံအတွက် မျိုးဖောက်ရုံကြီးပါ။ ခြေသည်းအလှ ပြုပြင်လိုက်ရင် ခြေသည်းအောက်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြသနာဖြစ်နိုင်တဲ့ အသားမာတွေကိုလဲ ဖယ်ရှားပြီး ဖြစ်သွားပါမယ်။ ခြေစိမ်ရေထဲမှာ ဆီလေးနည်းနည်း ထည့်ခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယား အကာအကွယ်ပါ ရနိုင်ပါသေးတယ်။
၂. စိတ်ဖိစီးမှု လျော့စေပါတယ်
သင့်အလုပ်ကိစ္စက တစ်နေ့လုံးမတ်တပ်ရပ်နေစေရရင် ခြေသည်း အလှ ပြုပြင်မှု ခံယူသင့်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ စီးပွားရေးကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ဆုံးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အချိန် တစ်ရက်ကို တစ်နာရီပေးပြီး ခြေသည်းပြုပြင်မှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ပြေလျော့စေပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေပါတယ်။
၃. ခြေနံ့ ပျောက်စေပါတယ်
ဘယ်သူမှ ခြေထောက်နံနံကြီးကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ခြေသည်းပြုပြင်မှုဟာ သေနေတဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို လုံးဝရှင်းထုတ်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ မိုးရာသီမှာဆို ခြေသည်းပြင်ရတာ ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသေးတယ်။ ဗက်တီးရီးယား ရှင်းလင်းဖို့ exfoliation လုပ်ဖို့လဲ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
၄. ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ယောက်ျားတွေဟာ ခြေသည်းညှပ်ရင် သိပ် ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ခြေသည်းတွေကို အရမ်းတိုတို ညှပ်မိတာ၊ အစွန်းတွေမှာ ခြေသည်းချွန်တွေကျန်ခဲ့တာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းဖြစ်ရတဲ့ လက်သည်တွေပါ။ ပညာရှင်တွေ ခြေသည်းအလှ ပြုပြင်ပေးတာဟာ သင့်ရဲ့ ခြေသည်းတွေကို အရှည် မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြတ်တောက်ပေးပါတယ်။ ခြေသည်းအလှပြုပြင်ရင်း ခြေထောက်ကိုပါ နှိပ်နယ်ပေးလို့ သွေးစီးဆင်းမှု ပိုကောင်းစေပြီး အနာလဲ သက်သာစေမှာပါ။
ကြည့်ကောင်းတဲ့ ယောက်ျားတွေကို မိန်းမတွေ ပိုစွဲတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို လက်ခံလိုက်ပါတော့။ အရမ်း အလွန်အကျွံ ပြင်နေစရာ မလိုပေမယ့် တိတိရိရိ၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ညှပ်ထားတဲ့ ခြေသည်းတွေဟာ ဘယ်ကောင်ကိုမဆို ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။ သင် ခြေသည်းအလှပြင်ခံဖူးရင် ဘာကြောင့် အလှပြင်ဖို့ လိုသလဲဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်။
သင် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပါတယ်။ ရေချိုးပါတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘာလို့ သင့်ခြေထောက်ကို အလှမပြင်ပဲ နေရမှာလဲ??
သငျ ခုံအကွီးကွီးပျေါမှာ ထိုငျနရေပွီး သငျ့ခွထေောကျကို ဇလုံ ကွီးကွီးထဲက ရနှေေးနှေးထဲမှာ မွှုပျထားရပါတယျ။ ခွသေညျးအလှပွငျဖို့ သငျလုပျပေးရမှာကတော့ ဒါပါပဲ။ ယောကျြားတှေ ခွသေညျးအလှပွုပွငျသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး ငါးခကျြကို ဖျောပွထားပါတယျ။
၁. ခွထေောကျကနျြးမာရေး ပိုကောငျးလာပါတယျ
ညဈပါတျတဲ့ ခွထေောကျတှဟော ဘကျတီးရီးယားမြိုးစုံအတှကျ မြိုးဖောကျရုံကွီးပါ။ ခွသေညျးအလှ ပွုပွငျလိုကျရငျ ခွသေညျးအောကျက အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှားပွီး ဖွဈသှားပါတယျ။ ပွသနာဖွဈနိုငျတဲ့ အသားမာတှကေိုလဲ ဖယျရှားပွီး ဖွဈသှားပါမယျ။ ခွစေိမျရထေဲမှာ ဆီလေးနညျးနညျး ထညျ့ခွငျးဖွငျ့ ဘကျတီးရီးယား အကာအကှယျပါ ရနိုငျပါသေးတယျ။
၂. စိတျဖိစီးမှု လြော့စပေါတယျ
သငျ့အလုပျကိစ်စက တဈနလေုံ့းမတျတပျရပျနစေရေရငျ ခွသေညျး အလှ ပွုပွငျမှု ခံယူသငျ့ပါတယျ။စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ စီးပှားရေးကို အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈဆုံးဆိုတာ လူတိုငျးသိပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အခြိနျ တဈရကျကို တဈနာရီပေးပွီး ခွသေညျးပွုပွငျမှု ခံယူသငျ့ပါတယျ။ အဲဒါဟာ သငျ့ရဲ့ စိတျကို ပွလြေော့စပွေီး သကျတောငျ့သကျသာ ရှိစပေါတယျ။
၃. ခွနေံ့ ပြောကျစပေါတယျ
ဘယျသူမှ ခွထေောကျနံနံကွီးကို မကွိုကျကွပါဘူး။ ခွသေညျးပွုပွငျမှုဟာ သနေတေဲ့ အရပွေားဆဲလျတှေ၊ အညဈအကွေးတှေ၊ ဘကျတီးရီးယားတှကေို လုံးဝရှငျးထုတျဖို့ အကောငျးဆုံး နညျလမျးဖွဈပါတယျ။ ခွထေောကျကို ပိုပွီး ဂရုစိုကျဖို့လိုအပျတဲ့ မိုးရာသီမှာဆို ခွသေညျးပွငျရတာ ပိုပွီး အဓိပ်ပါယျရှိပါသေးတယျ။ ဗကျတီးရီးယား ရှငျးလငျးဖို့ exfoliation လုပျဖို့လဲ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။
၄. ခွစှေယျငုတျခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ
ယောကျြားတှဟော ခွသေညျးညှပျရငျ သိပျ ဂရုမစိုကျတတျကွပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ခွသေညျးတှကေို အရမျးတိုတို ညှပျမိတာ၊ အစှနျးတှမှော ခွသေညျးခြှနျတှကေနျြခဲ့တာ အဖွဈမြားပါတယျ။ အဲဒါတှကေို ခွစှေယျငုတျခွငျးဖွဈရတဲ့ လကျသညျတှပေါ။ ပညာရှငျတှေ ခွသေညျးအလှ ပွုပွငျပေးတာဟာ သငျ့ရဲ့ ခွသေညျးတှကေို အရှညျ မှနျမှနျကနျကနျ ဖွတျတောကျပေးပါတယျ။ ခွသေညျးအလှပွုပွငျရငျး ခွထေောကျကိုပါ နှိပျနယျပေးလို့ သှေးစီးဆငျးမှု ပိုကောငျးစပွေီး အနာလဲ သကျသာစမှောပါ။
ကွညျ့ကောငျးတဲ့ ယောကျြားတှကေို မိနျးမတှေ ပိုစှဲတယျဆိုတဲ့ အခကျြကို လကျခံလိုကျပါတော့။ အရမျး အလှနျအကြှံ ပွငျနစေရာ မလိုပမေယျ့ တိတိရိရိ၊ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ညှပျထားတဲ့ ခွသေညျးတှဟော ဘယျကောငျကိုမဆို ကွညျ့ကောငျးစမှောပါ။ သငျ ခွသေညျးအလှပွငျခံဖူးရငျ ဘာကွောငျ့ အလှပွငျဖို့ လိုသလဲဆိုတာ သိသှားပါလိမျ့မယျ။
သငျ မုတျဆိတျရိတျပါတယျ။ ရခြေိုးပါတယျ။ ဆံပငျညှပျပါတယျ။ ဒါဆို ဘာလို့ သငျ့ခွထေောကျကို အလှမပွငျပဲ နရေမှာလဲ??
Previous: ပျော်ရွှင်ခိုင်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေး(၁၀)ခု
Next: အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခု